Fun house Ukuxhaphaza Indlu Yabantwana - Imagazini yoyilo
Ukuxhaphaza Indlu Yabantwana
Ukuxhaphaza Indlu Yabantwana Olu luyilo lolwakhiwo ukuze abantwana bafunde kwaye badlale, yona iyindlu eyiNwabisayo ngokupheleleyo evela kutata obalaseleyo. Umyili udibanise izinto ezisempilweni kunye neemilo zokhuselo ukwenza indawo entle nenomdla. Bazama ukwenza ukuba indlu yokudlala yabantwana ibe yefudumeleyo, kwaye bazama ukomeleza ubudlelwane babazali nomntwana. Umthengi uxelele uyilo ukuba lufezekise iinjongo ezi-3, ezizezi: (1) izixhobo zendalo nezokhuseleko, (2) zonwabisa abantwana kunye nomzali kunye (3) nendawo eyaneleyo yokugcina. Uyilo lufumene indlela elula necacileyo yokufezekisa iinjongo, ezisekhaya, ukuqala kwesithuba sabantwana.
Igama leprojekthi : Fun house, Igama labayili : Tienyu Wu, Igama lomthengi : TYarchistudio.
Ukuxhaphaza Indlu Yabantwana Tienyu Wu Fun house